Wararka - Iibinta gawaarida ee Shiinaha waxay u iftiimaysaa sida adduunka intiisa kale uga soo ifbaxayaan fayraska
Qof macaamil ah ayaa kala hadlaya wakiil iibiya goob ganacsi oo lagu iibiyo Ford oo ku taal magaalada Shanghai bisha Luulyo 19, 2018. Suuqa baabuurta ee dhaqaalaha ugu weyn Aasiya ayaa ah meel kali ah oo dhalaalaya maaddaama masiibada faafa ay hakineyso iibka Yurub iyo Mareykanka Qilai Shen / Bloomberg
Baahida loo qabo gawaarida Shiinaha ayaa marba marka ka dambeysa sii aadaya, taasoo ka dhigeysa suuqa baabuurta ee dhaqaalaha ugu weyn Aasiya meel kali ah oo dhalaalaya maaddaama cudurka faafa ee coronavirus uu caqabad ku yahay iibka Yurub iyo Mareykanka.
Iibinta gawaarida xamuulka, SUV-yada, basaska yar yar iyo gawaarida isku dhafka ah ayaa kor u kacay 7.4 boqolkiiba bishii Sebtember marka loo fiiriyo sanad ka hor oo ay gaareen 1.94 milyan oo cutubyo ah, Shirkadda Baabuurta Rakaabka ee Shiinaha ayaa Talaadadii sheegtay. Taasi waa kordhinta saddexaad ee tooska ah ee bil kasta, waxaana ugu horreyntii ku xirnaa baahida SUV-yada.
Gaarsiinta gawaarida rakaabka ee ganacsatada waxay sare u kacday 8 boqolkiiba ilaa 2.1 milyan oo unug, halka wadarta iibka gawaarida, oo ay ku jiraan gawaarida xamuulka iyo basaska, lagu kordhiyay 13 boqolkiiba ilaa 2.57 milyan, xogta ay gadaal ka sii daayeen Ururka Shiinaha ee Soosaarayaasha Baabuurta ayaa muujisay.
Iyada oo iibka gawaarida ee Mareykanka iyo Yurub ay wali saameyneyso COVID-19, soo nooleynta dalabka Shiinaha ayaa faa'iido u ah soo saarayaasha caalamiga ah iyo kuwa gudaha. Waxaa lagu wadaa inay noqoto waddankii ugu horreeyay ee caalami ah ee dib ugu soo noqda heerarka mugga ee 2019, inkasta oo kaliya 2022, sida laga soo xigtay cilmi-baarayaasha oo ay ku jiraan S&P Global Ratings.
Shirkadaha sameeya adduunka oo dhan waxay balaayiin doollar ku maalgashadeen Shiinaha, oo ah suuqa ugu sarreeya adduunka ee gawaarida tan iyo 2009, halkaasoo dabaqadda dhexe ay ku sii fideyso laakiin dhexgalka ayaa weli yara hooseeya. Calaamadaha waddamada sida Jarmalka iyo Jaban ayaa ka dillaacay aafada si ka wanaagsan kuwa ay xafiiltamaan ee maxalliga ah - saamiga isku-darka suuqyada ee Shiinaha ayaa hoos ugu dhacay 36.2 boqolkiiba sideedii bilood ee ugu horreysay halka ugu sarreysa oo ah 43.9 boqolkiiba 2017.
Xitaa marka suuqyada gawaarida Shiinaha ay soo kabanayaan, wali waxaa laga yaabaa inay diiwaan geliyaan hoos u dhacii saddexaad ee sanadlaha ah ee iibka, Xin Guobin, oo ah wasiir-ku-xigeenka Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyada Warfaafinta, ayaa sheegay bishii hore. Taasi waa sababta oo ah hoos u dhaca culus ee ku dhacay bilowgii sanadka, intii lagu jiray dhererka dillaaca.
Si kastaba ha noqotee, muhiimada Shiinaha waxaa xoojiyay iyada oo diirada saareysa kobcinta nidaamka deegaanka ee baabuurta korontada ku shaqeeya, oo ah isbadal dhanka teknolojiyada ah oo ay baabuurta sameeyaashu gashadeen waqti iyo lacag badan. Beijing waxay dooneysaa gawaarida tamarta cusub inay xisaabtamaan boqolkiiba 15 ama in ka badan suuqa 2025, iyo ugu yaraan kalabar dhammaan iibka toban sano kadib.
Jumladaha NEV-yada, oo ka kooban gawaari koronto saafi ah, iskudhafan isku dhafan iyo gawaarida unugyada shidaalka, ayaa kor u kacay 68 boqolkiiba illaa 138,000 oo unug, waa rikoor bishii Sebtembar, sida ay sheegtay CAAM.
Shirkadda 'Tesla Inc.', oo ka bilaawday alaab ay ka soo saarto shirkaddeeda Shanghai bilowga sanadka, waxay iibisay 11,329 baabuur, taasoo hoos uga dhacday 11,800 bishii Ogosto, PCA ayaa sidaas tidhi. Baabuur-sameeyaha Mareykanka ayaa galay kaalinta saddexaad ee jumladaha NEV bishii hore, wuxuu ka dambeeyay SAIC-GM Wuling Automobile Co. iyo BYD Co., PCA ayaa intaas ku daray.
PCA waxay tiri waxay rajeyneysaa NEVs inay gacan ka geysato wadista guud ee iibka gawaarida rubuca afaraad iyadoo la soo bandhigayo qaabab cusub oo tartan ah, halka awooda yuan-ka ay ka caawin doonto yareynta qarashyada gudaha.
Guud ahaan iibka gawaarida ee sanadka oo dhan waa inuu ka fiicnaadaa saadaashii hore ee 10 boqolkiiba foosha iyada oo ay ugu wacan tahay soo kabashada baahida, ayuu yiri Xu Haidong, oo ah ku xigeenka injineerka CAAM, isaga oo aan faahfaahin bixin.
Naxdinta Nuugista Bolt, Gawaarida Hub, Wadajirka Kubadda Tire, Naxdinta Rubber Rubber, Hood Shooga Nuugista, Jabinta Steering Front,